यी ४ भारतिय कलाकार: जाे नेपाल भनेपछि ‘मरिहत्ते’ गर्छन : हेर्नुहोस – Nep Stok
यी ४ भारतिय कलाकार: जाे नेपाल भनेपछि ‘मरिहत्ते’ गर्छन : हेर्नुहोस
फागुण १०, २०७८ मंगलबार 337
गोबिन्दा अहुजा :
श्रृति झा :
टेलिभिजनकी चर्चित अनुहार श्रृति झा लाई धेरैले नेपाली हो भनेर भन्ने गरेका छन् । वास्तवमा उनी नेपाली भने होईनन् । तर उनी आफनो परिवारको साथमा लामोसमय काठमाडौँ बसेकी थिईन् । बिहारमा जन्मिएकी श्रृतिले काठमाडौँमा मोर्डन इण्डियन स्कुलमा आफनो अध्ययन पुरा गरेकी हुन् । आफनो बाल्यकालनै नेपालमा बिताएको कारण उनी राम्रोसँग नेपाली बोल्न सक्छिन् । उनले जि टिभीको सिरियल ‘कुमकुम’ भाग्य बाट बिषेश चर्चा कमाएकी हुन् ।
भारती सिंह :
भारतको चर्चित कमेडीयन भारती सिंहमा पनि नेपालीकै र-गत बगेको छ । उनको आमा पञ्जाबी थिईन भने बुबा नेपाली । थोरै नेपाली समेत बोल्न सक्ने भारती आफनो नेपालसँग गहिरो सम्बन्ध भएको बताउँछिन् ।
अहमद खान :
Prevपल शाहले भने समिक्षा गर्भवती थिईन (अडियो सहित)
Nextसमीक्षासंग नाम जोडिएर अडियो सार्वजनिक भएपछि पलले दिए यस्तो स्पष्टीकरण, अडियोको बारेमा पनि गरे खुलासा
काठमाडौँमा लकडाउन गर्ने सरकारको तयारी ! कहिँले बाट ?
आफैँलाई ए,’सिड प्र’हार गर्ने युवकससँग विवाह गरेपछि…